မှတ်တိုင်သစ်...: အမေဒေါ်စု ပြန်လာပြီ
Thursday, November 18, 2010 12:27 AM | Posted by Unknown
The Irrawaddy's Blog: အမေစု ပြန်လာပြီ
0 Comments to အမေဒေါ်စု ပြန်လာပြီ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံသား ပန်းချီပညာရှင်မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ပြီး စီအင်န်အင်န် သတင...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် CNN အင်တာဗျူး
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဗွီအိုအေ ရ...
ဝါရင့်နိုင်ငံရေး သမားများ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲဖိတ်ကြား...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကို ဦးအောင်သန်း ကိုရည်မှန်း၍ ဆ...
ကာတွန်း အော်ပီကျယ် လက်ရာ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် HIV/AIDS ဝေဒနာရှင်များကို အားပေ...
အကျဉ်းကျ တိုင်းရင်းသားခေါင်း ဆောင်လွတ်မြောက်ရေး ဦ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၂၁ ရာစုနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဒုတိယအကြ...
Daw Aung San Suu Kyi's interview with BBC, Nov 15,...
Burma's Media Focus on Military Leaders, Parties A...
ဒီချုပ် ပါတီ ဆက်လက်ရပ်တည်ခွင့် အမှုကို လာမယ့် နိုဝင...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီး လူထုနဲ့...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြည်သူသို့ နှုတ်ခွန်းဆက် မိန့်ခ...
“ကြိုဆိုပါ၏” (ကာတွန်း ဟန်လေး - ဧရာဝတီဝက်ဘ်ဆိုက်)
ရွှေလိုဥတဲ့ အမေစု အောင်ဇေယျတု ဇေယျတု
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လိုက်ပို့တဲ့ ဘဘဦးလွင် ဇနီး နာေ...
ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးယွက်စစ် - ပင်လုံကို မပြန်သွားသရွေ့...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မိန့်ခွန်း (၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ ၁၄ ...
ပြည်သူကို အကျယ်ချုပ်မချပါနဲ့ – လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်...
The SPDC - Than Shwe (Burmese political song)
ပရင့်အောက်ပြီး ကပ်ထားဖို့Mr. Creator ဆီက လာတဲ့ ပ...
VOA: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ
ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်...
ဒီကေဘီအေဗိုလ်မှူးကြီး စောလားပွယ် သတင်းစကား
အန်လယ်ဒီ ဌာနချုပ် မှာ ပြောတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟောပြောပွဲက ၀မ်းသာစရာ ဖြစ်ရပ်ကေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အတွက် ဒီေ...